CLEMATIS QUUDINTA - ORGANIC IYO MACDANTA. - BEERTA
Sidee iyo waxa la siinayo clematis
Cuntadan quruxda badan ee quruxda badani waxay ka heshay luqada Giriigga, macnaheeduna waa "dhirta fuulaysa".
Clematis waxaa kale oo lagu magacaabaa "wartwood", "warthog", "awoowe curl" iyo "clematis".
Dabeecadda, waxaa jira ilaa 300 nooc oo clematis ah. Ku saabsan noocyada qaar ka mid ah clematis ayaa laga heli karaa halkan.
Waxaa loo qaybiyaa ku dhowaad dhammaan qaaradaha. Clematis Blossoms laga bilaabo guga dabayaaqada guga ilaa xagaaga dambe, iyo noocyada qaar - ilaa bilawga ah ee dhaxan.
Clematis wuxuu ku fiican yahay qurxinta deyrka. Haa, ma aha qof kasta ogyahay sida si habboon u quudiyo iyo sida loo bacrimiyo ubax this.
Maqaalkani waxaad ka heli kartaa jawaabaha su'aalahaaga.
Cermatis cudurrada - ka hortagga iyo xakamaynta xayawaanka boggayaga.
Halkan ku ogaan sida clematis jilicsan.
Qawaaniinta budada clematis: //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/klematis/obrezka-klematisa.html
Sida loo quudiyo clematis
Clematis waxay u baahan tahay nafaqooyin badan, sababtoo ah xaqiiqda ah in uu blooms badan iyo wakhti dheer, iyo sidoo kale ku dhowaad dhammaan qayb ka mid ah aboveground ee dhirta sanad walba. Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuusto in diirada ee Bacriminta macdanta waa in aanay noqon sare - u keeno qaybo yaryar.
Qaar ka mid ah beeralayda khibrad leh ayaa leh: marka ay dhacdo in aad bacrimisay ciidda si fiican, clematis waa in la quudiyo oo kaliya sanadka saddexaad ka dib markii laga beerto.
Bacriminta macdanta iyo bacrimiyayaasha waa in la beddelo. Clematis waa in la si fiican u waraabiyo ka hor bacarimiso.
Clematis ayaa la quudin karaa iyada oo ku xidhan wajiga horumarka geedka, laakiin aan ka badnayn 4 jeer xilli ciyaareedkiiba.
Bishii Sebtembar, inta lagu guda jiro diyaarinta, ku darso cunto lafo (200 g / m2) carrada. Xaqiiqda ah inay ku jirto fosfooraska waa clematis muhiim u ah.
Iyadoo aan waxaa, caleemaha bilaabi doonaa inay koraan brown, xididada iyo caleemaha horumariyo liidata.
Waxa kale oo aad ka samaysan kartaa ilaa 24 kg oo khudradda ceedhiin kasta clematis kasta ka hor beerashada.
Nitrogar ayaa loo baahan yahay dhirta inta uu kobcayo. Sababtoo ah la'aanta nitrogen, caleemaha clematis ayaa hoos u dhici kara, caleemaha u noqdaan huruud ah, qaadan on casaan guduudan, ubaxyadu noqon doonaa yar yar, oo leh midab yar. Bacriminta dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa noocyadan quudinta: slurry (1:10), shimbir shimbireed (1:15).
Bacriminta dabiiciga ah waxay u baahan yihiin inay bedelaan macaadin: amooniyam amooniyam, nitroammofoska ama HOL (15 g / 10 l).
Potassium wuxuu kor u qaadi doonaa ubaxa quruxda badan ee dhirtaada. Lugaha madow iyo pedicels, midab khafiif ah ee ubaxyo muujinaya la'aanta potassium. Guga, isticmaal nalalka potassium, ee August - nafaqada potassium. Ku dhufo 10 l 20 - 30 g.
Inta lagu jiro ubax, quudinta ayaa la joojinayaa. By quudinta dhirta muddadan, waxaad halis u yareeysaa muddada ubax.
Dhammaan sifooyinka beeritaanka clematis ayaa ka akhrisan boggayaga internetka.
Waxaan ka samaynaa beer caleenta leh gacmahayaga: http://rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/dekorativnye-sooruzheniya/delaem-ogorodnoe-chuchelo-svoimi-rukami.html
Dharka ugu sareeya guga
Quudinta guga way soo saaraan wax ka badan laba jeer bishii.
Ka dib markii cirridka caleemaha, waa wakhtigii ugu horeysay ee quudiyo. Clematis inta lagu jiro mudadaas waa ugu fiican ee lagu buufiyo foliar iyada oo xalka daciif ah Hure synthetic (ilaa 3 g halkii litir oo biyo ah).
Waxaa ugu fiican in lagu buufiyo fiidkii ama cimilada daruurta. Qoyaanku wuxuu socon doonaa waqti dheer, iyo bacriminta ayaa si fiican u nuugay.
Guga, clematis waxaa lagu shubay caano lime si looga hortago acidification ee ciidda. Isticmaal 200 g oo lime qiyaas ahaan litir oo biyo ah halkii 1 sq.
Wixii ka hortagga cudurka, 50 g oo ah copper sulfate la qasi karaa iyo baadiyaha waa in lagu shubay xal ah saldhigga.
Biyaha clematis guga ma aha wax ka badan hal jeer usbuucii, laakiin isku day inaad biyo hesho xididada dhirta (xididdada clematis ga 1 m dherer). Bannaanka u khibrad leh isticmaali humus inta lagu jiro waraabinta.
Ka hor inta beerta clematis, ciidda la karin karaa daroogada omu organic, "Omu Universal", kaas oo ma aha oo kaliya quudiyo dhirta, laakiin sidoo kale xajin qoyaanka gudaha ciidda.
Isku qas bacrimin lafteeda leh ciidda ka dibna ku shub rootiyada clematis leh.
Inta lagu jiro clematis transplantation, waxaad isticmaali kartaa daroogada "Zircon", kaas oo ka caawin doona dhirta loo isticmaalo habka cusub. Isticmaal daroogada oo kaliya waa in ay ahaato si waafaqsan tilmaamaha.
Si looga hortago cudurada, buufin carrada hoostiisa hoostiisa oo leh aasaas guga horraanta ama dayrta goor dambe (20 g halkii 10 l).
Inta lagu jiro horumarka firfircoon iyo koritaanka clematis, geedi socodka ciidda ka yar baadiyaha leh fungicide. Mid ka mid ah baadiyaha isticmaal 3 - 4 litir. Tani waxay si toos ah uga ilaalin doontaa geedka fangaska. Nidaamka waxaa la sameeyaa 2 ilaa 3 jeer 14kii maalmoodba mar.
Diyaargarowga soo socda waxaa loo isticmaali karaa nafaqada foliar: "Master", "Avkarin", "Mortar-flower". Dhirtaada waxay heli doontaa nafaqooyinka lagama maarmaanka ah 5 saacadood gudahood kaddib marka la buufiyo.
Sidaa darteed, haddii aan nidaamsanahay dhammaan qodobada kor ku xusan, waxaan soo qaadan karnaa natiijooyinka soo socda:
Clematis waa la quudin karaa wax ka badan 4 jeer xilli kasta;
haddii lagu jiro beerashada aad isticmaashay Bacriminta gaarka ah ee ciidda, uma baahnid inaad ku quudiso clematis ee sanadkan;
Waxaa jira Bacriminta kala duwan ee wejiyada kala duwan ee horumarinta dhirta. Waxaa laga yaabaa in lagu iibsado dukaanka ama aad naftaada u sameysato;
Sida qiyaasta looga hortago cudurrada kala duwan, daroogooyinka gaarka ah waxaa laga iibsan karaa dukaanka
Rosehip waa mid aad u faa'iido leh jirka iyo waxa ku koraa dad badan oo dalka. Baro sida loo qalajiyo qalalan Rose leh maqaalkeenna.
Noocyada dhirta Blackberry: //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/ezhevika-razmnozhenie-posadka-uhod-poleznye-svojstva.html
Isku day inaad qiimeeyso heerka qoyaanka ciidda ka hor dhaymada. Haddii ay tahay qoyan, waxaa fiican in la sameeyo quudinta qalalan: kala-sooc qiyaasta loo baahan yahay bacriminta hoostiisa ka dibna u daadi ciidda. Haddii ciidda ay qallalan tahay, bilow by waraabiyo dhirta, ka dibna codso bacriminta dareeraha ah iyo mar kale biyo;
Dharka dabiiciga ah waad nadiifin kartaa adigoo isticmaalaya haramaha. Si arrintan loo sameeyo, weedhaha dhirta biyo iyo usbuuc ku adkeyso. Isticmaal xalka nuska la qasiqiyay biyo;
waraabinta clematis, isku day inaad biyo hesho on oo kaliya ee xididdada geedka. Ka dib markii waraabiyo - xooraan ciidda;
ka hor inta bacriminta geedka, waa lagama maarmaan in laga takhaluso haramaha;
7 sano kadib, biyuhu ma gaari karaan xididdada clematis, dhirta ayaa dhiman karta. Si aysan taasi u dhicin, dig digo leh saldhig la qodayo oo u dhow dhirta. Marka lagu waraabiyo dheriyada clematis waxaa sidoo kale lagu buuxin doonaa biyo, taas oo u dhex geli doono xididada;
cawska ornamental ama ubax la yaab leh ayaa lagu beeray karaa meel u dhow xididdada dhirta - tani waxay ilaalin doontaa nidaamka clematis xidid ka badan kulaylka;
inta lagu jiro roobab badan, ku dabool qaybta hoose ee warshadda leh ash qoryo. Tani samee ka dib roob kasta - taasi waxay ka hortagi doontaa xididdada ka soo jeeda;
waa in la xusuusnaado in digada cusub aan loo isticmaali karin bacriminta.